Sina Fampidirana sy famahana olana momba ny orinasa mpamokatra vacuum Supercharger sy mpamatsy | TieLiu
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny supercharger vacuum sy ny boosteris vacuum izay misy ny booster vacuum eo anelanelan'ny pedal frein sy ny silindrety master frein, izay ampiasaina hampitomboana ny dian'ny mpamily amin'ny varingarin'ny master; raha ny supercharger misy banga kosa dia hita ao amin'ny fantsom-pifandraisana misy eo amin'ny varingarin-drivotra mavesatra sy ny varingarin'andevo, izay ampiasaina hampitomboana ny tsindry solika avoakan'ny varingarin'ny master ary hampiakatra ny vokan'ny freins.
Ny vacuum supercharger dia misy ny rafi-pitantanana sy ny rafitra hydraulic, izay fitaovana fanerena ny rafitra fanamafisam-peo.
Vacuum supercharger no ampiasaina amin'ny fiara mpamaky herinaratra antonony sy malefaka. Miorina amin'ny rafitra fanamafisam-peo hydraulic paompy indroa, supercharger misy banga ary andiana rafitra fanamafisam-peo misy valizy fanaraha-maso vaksina, varingarina ary fantsom-pantsaka vaksinina no ampidirina ho loharanon'ny herin'ny herin'ny freins, hanatsarana ny fanatanterahana ny freins ary mampihena ny herin'ny fanaraha-maso ny freins. Tsy mampihena ny hamafin'ny asan'ny mpamily ihany fa manatsara ny fiarovana ihany koa.
Rehefa simba sy miasa tsy mandeha tsara ilay «supercharger« banga dia matetika no mitarika tsy fahombiazana vaky, tsy fahombiazana «frein», «drag drag» sns.
Tapaka ny «supercharger« banga «hydraulic frein» ary izao no antony:
Raha simba ny piston sy peratra hoditra an'ny varingarina fanampiny na tsy voaisy tombo-kase ny valizy, dia miverina tampoka any amin'ny efitrano tsindry ambany ny sisin'ny aprona na ilay savily lalana mandritra ny freins. Amin'izao fotoana izao, raha tokony hampiasa hery, dia hihemotra ny pedal noho ny fihenan'ny tsiranoka avo lenta avo lenta, izay miteraka tsy fahombiazan'ny frezy.
Ny fisokafan'ny valizy volo sy valva-drivotra ao amin'ny valizy fanaraha-maso dia mifehy ny kintana entona miditra amin'ny efitrano aorian'ny fandoroana, izany hoe ny fisokafan'ny valizy volo sy valva-drivotra dia misy fiantraikany mivantana amin'ny vokatra afterburner. Raha tsy voaisy tombo-kase mafy ny seza valizy, dia tsy ampy ny habetsaky ny rivotra miditra ao amin'ny efitranon'ny booster, ary ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitranon'ny rivotra dia tsy mitoka-monina mitongilana, ka miteraka fihenan'ny effet afterburner sy ny freins tsy mandaitra.
Raha kely loatra ny elanelana misy eo amin'ny valizy sy ny valizy, dia mihemotra ao aoriana ny fotoana fanokafana ny valva-drivotra, mihena ny diplaoma fanokafana, miadana ny vokan'ny pressurization ary mihena ny effet afterburner.
Raha lehibe loatra ny elanelana dia tsy ampy ny fanokafana ny valva vakumkana rehefa mivoaka ny frein, izay hiteraka hisintona ny frezy.
Novakiny Servo, Booster Asyria, novakiny, Vaky frein, Vacuum fanamafisana, Fanamafisam-peo avy any aoriana, Fanamafisana ny freins,